Faritra 16 any Frantsa no miverina amin'ny hidin'ny COVID-19
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » France Travel News » Faritra 16 any Frantsa no miverina amin'ny hidin'ny COVID-19
Ny praiminisitra Jean Castex
Ny olona frantsay 18 tapitrisa any amin'ny faritra toa an'i Paris, Hauts-de-France any avaratra ary koa Alpes-Maritime amin'ny Mediterane dia tokony mijanona ao an-trano
Napetraka eo ambanin'ny curfew nasionaly i Frantsa nanomboka ny tapaky ny volana desambra
Hisy ny “fepetra goavambe” vaovao hanan-kery any amin'ireo faritra 16 voadona mafy indrindra any Frantsa, mba hifehezana ny fiakaran'ny COVID-19 vaovao
Variant hita voalohany tany Angletera, ankehitriny dia mitentina 75 isan-jaton'ny tranga vaovao miabo ao amin'ny firenena
Nanambara ny governemanta frantsay androany fa hisy "fepetra goavambe" vaovao hanan-kery any amin'ireo faritany 16 voadona mafy indrindra, hanakanana ny fiakaran'ny COVID-19 vaovao.
Ny praiminisitra Jean Castex, tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety dia nilaza fa manomboka rahampitso misasakalina, eo amin'ny 18 tapitrisa eo ny olona frantsay any amin'ny faritra toa an'i Paris, Hauts-de-France any avaratra ary koa Alpes-Maritime amin'ny Mediteraneana dia tokony hipetraka ao an-trano.
Ny fitsangatsanganana an-trano any ivelany dia ny mandeha miasa rehefa tsy vita lavitra, amin'ny vonjy taitra, ny fanampiana, ny miantsena, na ny fanaovana fanatanjahan-tena any anaty radius 10 km avy any an-trano.
Hisokatra hatrany ny sekoly. Tsy maintsy hakatona ireo magazay tsy ilaina, ary voarara ny fivezivezena eo amin'ny faritra.
Mandritra izany fotoana izany, ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny firenena dia hiala sasatra manerana ny firenena ary hifarana amin'ny 7:00 hariva fa tsy amin'ny 6:00 hariva, raha jerena ireo andro lava kokoa, hoy ny praiminisitra.
"Tonga ny fotoana lavitra, miaraka amin'ny famerana mitaky be loatra izay toe-javatra tena manakiana," hoy i Castex. "Ireo fepetra raisinay anio any amin'ny faritra tena iharan'izany dia azo hitarina, raha ilaina izany, any amin'ny faritra hafa amin'ny faritany."
"Mihazakazaka ny valan'aretina," hoy izy, ary nanampy fa ny valanaretina viriosy dia "miseho ho toy ny onja fahatelo" noho ny fielezana nampitebiteby ilay karazana "mahery setra sy mety ho lehibe kokoa" hita voalohany tany Angletera, 75 isan-jaton'ny tranga miabo vaovao ao amin'ny firenena.
Napetraka eo ambanin'ny curfew nasionaly i Frantsa nanomboka ny tapaky ny volana desambra. Ny faritra sasany any avaratra sy atsimo atsinanan'ny firenena dia efa nikatona tamin'ny faran'ny herinandro mba hametahana ny fivezivezena.
Ny alakamisy ihany koa dia nitatitra aretin-tratra COVID-34,998 vaovao 19 24 tao anatin'ny 38,501 ora lasa izay, ny fanisana faharoa avo indrindra isan'andro hatramin'ny volana novambra lasa teo taorian'ny 4,181,607 Alarobia. Ny isan'ny tranga voaangona dia nahatratra 268, raha ny isan'ny maty dia 91,679 ka hatramin'ny XNUMX.
Ny fidirana hopitaly dia nitombo 75 ka hatramin'ny 25,389, raha toa ka 4,246 27 ny isan'ireo tao amin'ny tobim-pitsaboana vonjimaika, XNUMX izany tamin'ny Alarobia.
“Miatrika onja fahatelo isika. Saingy ny tsy fitoviana lehibe amin'ireo teo aloha dia ny fahitantsika fomba fijery ankehitriny: vaksiny, ”hoy i Castex tamin'ny mpanao gazety.
Hatreto dia olona 5,748,698 2,393,568 XNUMX no nahazo fatra vaksiny farafaharatsiny, ary XNUMX no nahazo ireo jab roa.
Nilaza i Castex fa hitohy ny zoma ny fivorian'ny AstraZeneca ary handray ny vaksiny izy "mba hampisehoana fa afaka matoky tanteraka isika."
"Ny vaksinin'ny AstraZeneca COVID-19 dia mandaitra, araka ny fanamafisan'ny mpanara-maso eropeana," hoy izy, momba ny fanambarana teo aloha nataon'ny European Medicines Agency (EMA).
France dia iray amin'ireo firenena eropeana maro izay nampiato ny famoahana ny vaksinin'ny Oxford / AstraZeneca tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, nitanisa ny ahiahy momba ny tatitra momba ny olona voan'ny lalan-drà aorian'ny jab.
Eo am-pielezana amin'izao tontolo izao iadiana amin'ny areti-mifindra, dia mandeha ny vaksiny any amin'ny firenena mihamaro izay manana vaksinin'ny coronavirus efa nahazo alàlana.
Ny sekretera mpanatanteraky ny masoivohom-pirenena mikambana momba ny toetrandro dia miarahaba ny rejisitra momba ny fizahan-tany momba ny toetrandro SUNx Malta